Ngwa ngwa izi ozi iri abụọ na ise kacha mma | Androidsis
Ngwa ngwa izi ozi 25 kacha mma
Ngwa izi ozi abụrụla isi na, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị usoro nkwukọrịta maka nde ndị ọrụ gburugburu ụwa, ebe ọ bụghị naanị na -enye anyị ohere izipu ozi ederede, kamakwa Ha na -enye anyị ohere ịkpọ oku olu na ọbụna oku vidiyo.
Ọ bụrụ na anyị nwere ike chọọ ngwa izi ozi, na Storelọ Ahịa Play anyị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu, n'agbanyeghị na ọ bụghị ha niile na -enye anyị ọrụ kacha nta nke ndị ọrụ chọrọ taa: oku, oku vidiyo, ozi olu, kesaa faịlụ .. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma. kedu ngwa ngwa izi ozi kacha mma, Ana m akpọ gị oku ka ị nọgide na -agụ ihe.
N’isiokwu a anyị gosiri gị 25 ngwa ozi, ngwa ezubere maka ọtụtụ ojiji, ọ bụghị naanị maka ngalaba nkeonwe, kamakwa maka ọkachamara, ngalaba chọrọ ọrụ ọzọ yana nke chọkwara nzuzo nke ị gaghị ahụ na ngwa niile.
1 Facebook ozi
6 Ngalaba Microsoft
9 Otu egwu
10 Privatye Ugbu a
11 Wickr Me - Onye ozi nzuzo
14 Ekwentị nkịtị
16 Voxer Walkie-Talkie
17 Kakao Kwuo
19 Crypto - Izi ozi nkeonwe yana nchekwa
20 Izi ozi nchara
22 Otu M
Facebook Messenger bụ otu n'ime ngwa izipu ozi nke kacha ewu ewu na mba ụfọdụ dịka United States, ebe a na -anaghị eji WhatsApp arụ ọrụ n'agbanyeghị na ọ so n'otu Facebook.
Facebook Messenger na -enye anyị otu ọrụ dị ka ngwa ọ bụla ọzọ mana, n'adịghị ka ọtụtụ, gụnyere mgbasa ozi, na -eme ka ọ bụrụ ngwa kachasị akwadoro.
Ọ nwere ngwa maka Windows na macOS Site na nke anyị nwere ike jiri oku kọmputa anyị kpọọ oku vidiyo dị mma na mgbakwunye na ịga n'ihu mkparịta ụka anyị nwere na mbụ wee malite na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ nke ọzọ.
Developer: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Meta Platforms, Inc.
Agbanyeghị na Discord bụ ngwa amụrụ maka igbo mkpa nke ndị na -egwu egwuregwu vidiyo, nke nta nke nta ka agbatịpụrụ ya na sistemụ arụmọrụ niile ma ọ dị ugbu a na kọmpụta na ngwaọrụ mkpanaka, yana onye ahịa weebụ.
Ngwa ahụ na-enye ohere kpọọ oku, oku vidiyo, mepụta ọtụtụ nkata, kwado GIF… Ndị ọrụ nwere ike ịmepụta sava iji mepụta otu, nke na -eme ka ọ bụrụ ezigbo ngwa maka nnukwu ìgwè mmadụ nwere ihe jikọrọ.
Esemokwu bụ dị n'efuAgbanyeghị, ikpo okwu na -enyekwa anyị ndenye aha nke na -enye anyị ohere itinye ndozi na akaụntụ, mepee ihe ịchọ mma ...
Discord - kpakọrịta, kparịta ụka ma sonye
Developer: Nsonaazụ Inc.
Agbanyeghị Snapchat amughi dị ka ngwa izi ozi mana dị ka netwọkụ mmekọrịta, ọ na -enye anyị ọtụtụ ọrụ ụdị ngwa a dị ka oku olu, ozi vidiyo, ozi foto na ozi ederede.
Ozi niile, vidiyo na ozi ndị ọzọ ezitere, a na -ewepụ ya na akpaghị aka ozugbo elechara ya, na -eme ka ọ dị mma maka ndị na -achọghị ịhapụ ihe mkparịta ụka ha.
Snapchat na -akwado nkata otu n'ọkwa ka ukwuu na ndị enyi gị niile. Ngwa ndị ọzọ (Instagram, ọkachasị) emeela ọtụtụ atụmatụ ngwa ahụ. Agbanyeghị, Snapchat ka na -eto eto nke ukwuu.
Slack bụ otu n'ime ndị ama ama ngwa izi ozi / mkparịta ụka kacha mma maka azụmaahịa. Ọ nwere ọdịdị dị ọcha nke ukwuu, na -enye gị ohere ịmepụta ọwa, kpọọ oku ...
Ọ na-ejikọ ọnụ na nnukwu ngwa ndị ọzọ dị ka Google Drive, Asana, yana ndị ọzọ maka ntụrụndụ onwe dị ka Giphy. Ndị ọrụ nwere ike sonye na sava dị iche iche na ọ bụ kpam kpam free.
Anyị nwere ike ịtụle nke ahụ Slack bụ ụdị ọkachamara Discord. Ulo oru nke choro atụmatụ na njikọta karịa ngwa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ nwere nhọrọ nke ịkwụ ụgwọ ndenye aha maka nhọrọ maka ihe ndị ọzọ.
Developer: Slack Teknụzụ Inc.
Signal bụ otu n'ime ngwa ozi kacha ewu ewu maka ọgwụgwọ ọ na -eji data yana yana ịgụnye otu njirimara dị ka ngwa ndị ọzọ dị n'ụdị a dị ka izipu ozi ederede, onyonyo, faịlụ, oku ọdịyo na oku vidiyo.
Ngwa ahụ gụnyekwara Izuzo na njedebe ịbụ otu n'ime ndị mbụ tinyere ya na ndabara yana Telegram.
Na mbido 2021, ọ nwetara a mmụba dị egwu na ndị ọrụ N'ihi amụma m na -eji, achọrọ m iwebata WhatsApp. Telgram dị maka nbudata kpamkpam na anaghị etinye ịzụrụ ma ọ bụ mgbasa ozi.
Ama - Izi ozi nkeonwe
Developer: Ntọala mgbaàmà
Ndị otu Microsoft bụ nhọrọ Microsoft maka mmadụ niile ụlọ ọrụ na -eji Slack ugbu a na Microsoft 365 (Office ochie 365). Iji gbasaa ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na -eji Otu na mpụga ụlọ ọrụ, Microsoft etinyela ya nwa amaala na Windows 11 wee tinye ya na sistemụ.
Ndị otu na -enye ọtụtụ atụmatụ, site na ya izi ozi otu, ọwa nkata, na ngwaọrụ nhazi maka oku vidiyo na olu na ịkekọrịta faịlụ.
Nkata ahụ gụnyere ohere nke ị na -eme nyocha zuru oke, amamọkwa ahaziri iche, nchekwa azụmaahịa yana atụmatụ nnabata, yana ijikọ n'ofe ngwaọrụ Office niile.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi nnukwu ìgwè ndị enyi, ya na ezinụlọ ma ọ bụ ndị ọrụ ibe ịkekọrịta ozi niile, Ndị otu Microsoft bụ ngwa ị na -achọ.
Ọtụtụ ndị na -eji Viber abanye Mba Arabia, dị ka WhatsApp na Europe na Latin America. Na mgbakwunye, ọ karịrị ngwa dị mfe nke ụdị a ebe ọ na -enyekwa anyị ohere ịkpọ oku na nọmba ekwentị dị ka Skype.
Ọ nwere ahụmịhe zuru oke, nke gụnyere ozi, oku, nkata na -ebibi onwe ya, nkata otu, ozi vidiyo, nkata vidiyo na ndị ọzọ. Ọ gụnyekwara ụfọdụ mgbakwunye dị ka akwụkwọ mmado, nchịkọta akụkọ, na ndị ọzọ.
Site na ngwa anyị nwere ike nweta ọtụtụ akwụkwọ mmado, nke a na -akwụ ọtụtụ n'ime ha, n'agbanyeghị na ha adịghị mkpa ka ha nwee ike iji ngwa ahụ na -enweghị nsogbu. Ọ nwere ngwa maka Windows na macOS.
Developer: Viber Media S.à rl
Skype bụ otu n'ime ngwa ịkpọ oku kacha ewu ewu. Onye ọ bụla maara ihe Skype bụ na otu o si arụ ọrụ, mana ihe ọtụtụ ndị amaghị bụ na ọ dịkwa ngwa ozi kacha mma.
Ngwa a bụ otu n'ime nke zuru oke, ebe ọ gụnyere nkwado multiplatform, ọ bụ ya mere o ji dị na nke ọ bụla n'ime sistemụ eji arụ ọrụ, ma mkpanaka ma na desktọpụ.
Na-enye anyị ohere kekọrịta ọtụtụ ụdị faịlụ, gụnyere akwụkwọ, GIF, vidiyo ma tinyekwa onye ntụgharị okwu n'otu oge nke na -enye anyị ohere isoro ndị na -asụ asụsụ ndị ọzọ nwee mkparịta ụka.
Band bụ a ikpo okwu nkata otu na nhazi nke emebere maka otu ndị ọzọ na -ezighi ezi dịka ndị enyi, ezinụlọ, otu ọmụmụ, otu ndị agbata obi, nne, ụlọ akwụkwọ ...
Ndị ọrụ nwere ike ịmepụta otu omenala wee kpọọ ndị enyi ha, na -ezisa ọkwa izugbe site na bọọdụ obodo na mgbakwunye na -enye nkata nzuzo n'etiti ndị ọrụ.
Ndị otu otu nwere ike kesaa faịlụ, mepụta ọba foto, mee nyocha, ma hazie ihe omume na kalenda ekekọrịtara, na -enye gị ngwa ọrụ siri ike maka izi ozi kwa ụbọchị yana ọrụ nhazi otu.
BAND - Otu na obodo
Privatye Ugbu a
Onye ozi Pryvate Now na -enye RSA-4096 ozi ezoro ezo na ozi ngwa ngwa, yana ozi na-ebibi onwe ya ịbụ ndị na-ege ntị lekwasịrị anya ọkachamara na azụmaahịa ya. Mana ngwa ahụ na -enye ụfọdụ arụmọrụ siri ike ọbụlagodi na ọkwa efu ya.
Ndị ọrụ dị njikere ịnweta adịchaghị ndenye aha Ha na-enweta olu nkeonwe yana oku vidiyo, oku ogbako echekwara, email nkeonwe, nchekwa faịlụ na mgbochi mgbochi ka ị nwee ike iji ngwa ahụ n'ụwa niile.
Pryvate Ugbu a - Ngwa Nzuzo
Developer: Criptyque -Pryvate nwere oke
Wickr Me - Onye ozi nzuzo
Wickr Me bụ ngwa ozi zoro ezo na -enye gị ohere izipu ederede nkeonwe, foto, ozi olu na vidiyo, nwere izo ya ezo na njedebe. Ozi ndị ekesara na faịlụ na-ebibi onwe ha mgbe oge nke anyị guzobere na mbụ.
Anyị nwere ike ịmepụta mkparịta ụka ma ọ bụ sonye otu nkata nke ihe ruru ndị sonyere iri, ị chọghị adreesị ozi -e ma ọ bụ akara ekwentị iji debanye aha maka ngwa ahụ.
Njirimara ndị ọhụrụ gụnyere ike pinye nkata na otu kachasị amasị gị n'elu site na listi mkparịta ụka gị, maka ịnweta nfe.
Threema bụ ngwa ozi ọzọ echedoro nke bu n'obi dobe data gị n'aka ụlọ ọrụ na gọọmentị. Enwere ike iji ngwa ahụ n'amaghị ama, ọ bụghịkwa naanị ozi, kamakwa oku ekwentị nwere ike izo ya na nzuzo.
Ọ bụ ezie na njikọ echekwara bụ isi ihe nke ọtụtụ ndị ozi, Threema na -aga maịl ọzọ site n'ịhụ na echekwara ozi kọntaktị na sava ha na data ọ bụla anyị kesara nke gafere ha na -ehichapụ ozugbo ezitere ya.
Nsonaazụ bụ na faịlụ mpaghara ka dị na ekwentị gị, karịa na sava ndị ọzọ ebe ozi nwere ike igbochi ndị omebe iwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ nchịkọta data.
Ọ dịghị mkpa iji email ma ọ bụ ozi ndị ọzọ banye nke njirimara nkeonwe, nke na -ebelata ego data anyị ga -enyerịrị iji ya.
Threema na -enye ahụmịhe echekwabara na nchekwa na amaghị aha. Nke ahụ nwere ọnụ ahịa euro 3,99 na uỊzụta otu oge na-enweghị ụdị ndenye aha ọ bụla.
Tox bụ ọrụ ozi jikwaa ma na -elekọta ya site n'aka ndị na -eji ya. N'iji usoro mmepe mepere emepe, e mere Tox na ebumnuche onye ọrụ n'uche.
Enwere ngwa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nyiwe niile, ngwa ndị ahụ ha abụghị ndị ọchịchị, kama ọ bụ ọrụ dị iche iche nke ndị mmadụ nwere mmasị idobe ikpo okwu a ka ọ na -arụ ọrụ.
Ọrụ ahụ na-akwado idekọ ozi n'otu n'otu na otu, ozi na ozi vidiyo na ịkekọrịta faịlụ. Mmekọrịta niile ha na-ezoro ezo ruo ọgwụgwụ.
Enwere otu ụdị dị iche iche nke ndị ahịa Android (anyị na -ahapụ abụọ n'ime ha n'okpuru). Maka nyiwe desktọọpụ, anyị nwere ngwa qTox na uTox.
Ebe ọ bụ na ndị obodo na -elekọta ọrụ ndị a n'efu, ọganihu nwere ike dị nwayọ mgbe ụfọdụ. Ọrụ dị iche iche ga -enwe mmejupụta atụmatụ dị iche iche, yabụ na ọ bụghị njirimara Tox niile ga -arụ ọrụ na ndị ahịa Tox niile.
N'ezie, ọrụ ndị bụ isi, dị ka nkata ederede, ozi ọtụtụ na ịkekọrịta faịlụ ha na -arụ ọrụ na -enweghị ntụpọ na ngwa niile enwere.
Rịba ama nke ahụ Tox na -eto eto mgbe niile. Ọdịdị kewara ekewa nke ngwa nwere ike ibute nsogbu na ọrụ nke ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị na -achọ ikpo okwu ozi efu na enweghị ozi, Tox bụ ngwa / ọrụ ị na -achọ.
Developer: Ọrụ Tox
Developer: Egwu Corp. Ltd
Silent Circle bụ onye na -eweta ngwanrọ nkwukọrịta echekwara nke na -enye ozi ezoro ezo na oku vidiyo, yana ozi ezoro ezo na nke na-ebibi onwe ya na mgbakwunye na nnyefe faịlụ.
Igodo nzuzo dị n'aka ndị ọrụ n'onwe ha.
Mwepu bụ isi bụ ọnụahịa dị elu. Ịwụnye ngwa Silent Circle bụ n'efu, mana ọ gaghị arụ ọrụ ruo mgbe anyị kwụrụ $ 9,95 kwa ọnwa.
Ebumnuche Silent Circle bụ ndị ọrụ azụmaahịa chọrọ nzuzo nzuzo maka ọrụ dị ka gọọmentị, nnukwu ụlọ ọrụ ...
Ekwentị na -agbachi nkịtị - Ịkpọ oku & Izi ozi echekwara
Waya nwere Izuzo na njedebe maka ozi ngwa ngwa, oku na vidiyo, yana nkwado maka GIF, ọdịyo na obere vidiyo yana ịkekọrịta faịlụ mpaghara yana ntinye Dropbox.
Ngwa ahụ na-enyekwa mmekọrịta n'etiti ikpo okwu n'etiti ngwaọrụ yana nkwado maka ọtụtụ akaụntụ, na-enye gị ohere nkwukọrịta onwe onye na ọrụ.
Wire na -eji Usoro nzuzo nzuzo nke Proteus dabere na protocol Signal ọ bụkwa ebe mepere emepe ka onye ọ bụla nwee ike nyochaa ọrụ ya. Ngwa mkpanaaka na weebụ nke ngwa ahụ bụ n'efu, na -enye ohere maka ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ọrụ. Ọ na -enyekwa ngwa maka sistemụ arụmọrụ desktọọpụ.
E hiwere ụlọ ọrụ nne na nna, Wire Swiss, na Switzerland, ama ama maka iwu nzuzo ya. Na 2019 ọ kwagara United States na -ebute ahụ erughị ala nke ndị ọrụ Agbanyeghị, na 2021 ọ kwagara Europe ọzọ, ọkachasị Berlin.
Wire • ozi nchekwa
Developer: Waya Switzerland GmbH
Ọ bụrụ na ihe na -amasị gị bụ ozi olu, ị kwesịrị ịnwale ngwa Voxer. Ngwa a na -enye a ọzọ na-agbakwunyere olu karịa ọtụtụ ngwa ndị a, na-enye ndị ọrụ ohere izipu ozi olu yiri ya na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ ngwaọrụ mkpagharị.
Ndị ọrụ nwere ike gee ntị na ozi ndụ na ngwa ma ọ bụ kpọọ ozi dịka ozi olu. Ịnwekwara ike izipu na nata ozi ederede, foto, vidiyo na ozi ọnọdụ.
Na mgbakwunye na izi ozi, ngwa na -akwado ìgwè nke ihe ruru mmadụ iri atọ ma na-enye ozi ezoro ezo na njedebe na njedebe site na iji akara mgbaama.
Ngwa a bụ n'efu, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta ọrụ niile, anyị ga -emerịrị ya kwuo ndenye aha Ọ na-emepe atụmatụ dị ka akụkọ ozi na-akparaghị ókè, njikwa njikwa nkata otu, yana ọnọdụ walkie-talkie na-enweghị aka.
Developer: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ VoxerPro LLC
Kakao Talk bụ ngwa nke Ederede ederede kacha ewu ewu na South Korea. Mara maka ozi ngwa ngwa yana ntụkwasị obi n'agbanyeghị netwọkụ ọ bụla ejikọtara na ya, KakaoTalk abụrụla ebe ọtụtụ ndị ọrụ na-ekele ike ịmepụta mkparịta ụka otu.
Akụkụ pụtara ìhè bụ njikọta azụmahịa e-commerce na ngwa ahụ. KakaoTalk na -enye ndị ọrụ Kupọns pụrụ iche na azụmaahịa sitere na ụdị ama ama ịkọrọ ndị enyi gị na ezinụlọ gị.
Ngwa aghọọla ewu ewu maka azụmahịa na ugbu a ma ọ bụna -enye kaadị kredit ka ndị ọrụ nwee ike iji ego mebere ha.
Atụmatụ ndị ọzọ gụnyere ike mepụta kalenda nke gị yana tọọ oge na ihe ncheta maka nri ehihie, nzukọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ.
KakaoTalk: izi ozi
Developer: Ụlọ ọrụ Kakao Corp.
Line bụ ngwa ama ama, ọkachasị na Japan. Na mgbakwunye na njirimara ọkọlọtọ niile nke ngwa izi ozi, na -ejikọta nri dị ka Facebook, ebe anyị nwere ike ịhụ ma malite akwụkwọ ndị enyi anyị.
Ọ na-enyekwa anyị ohere kpọọ oku na oku vidiyo. Ọ gụnyere ụlọ ahịa akwụkwọ mmado yiri nke Viber nyere, ebe anyị nwere ike ịhụ ụdị ngwa a n'efu yana ego.
Mkparịta ụka otu kwere chịkọta ndị sonyere 500, nkata niile ezoro ezo site na njedebe ruo na njedebe, anyị nwere ike iso ndị na-ese ihe na ụdị, mepụta na ịkekọrịta ndị enyi anyị yana ịlele vidiyo YouTube.
Akara: Kpọọ na ederede
Developer: Corporationlọ ọrụ LINE
Crypto - Izi ozi nkeonwe yana nchekwa
Ngwa ọzọ na -atọ ụtọ nke anyị nwere iji dobe ozi anyị na nzuzo na Crypto, ngwa na -ezochi ozi site na njedebe ruo na njedebe, na -enye ohere ngọngọ ịnweta ngwa ahụ, na -adọ ndị ọrụ aka na ntị ma ọ bụrụ na ewere nseta ihuenyo, na -enye ohere ịtọ oge maka ozi ga -apụ n'anya ...
Crypto dị maka dbudata n'efu. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ, anyị ga-aga ebe ndenye ọpụpụ wee jiri ịzụrụ otu oge ọ na-enye anyị, na-akwụghị ụgwọ kwa ọnwa.
Crypto - nkata nzuzo gị
Izi ozi nchara
Ustjá na -akwụ onwe ya ụgwọ dị ka "onye ozi kachasị echebe n'ụwa," yabụ ọ bụrụ na nzuzo bụ nchegbu, ọ nwere ike ịba uru ịnwale ya. Ngwa bụ n'efu na ihe niile ozi na -ehichapụ na -akpaghị aka mgbe awa 24 gachara.
Dị ka Telegram, na -enye anyị ohere ihichapụ ozi ọ bụla ezitere ozugbo na -ahapụghị akara ọ bụla (ọ bụghị dị ka WhatsApp na -eme). Ọ bụrụ na onye ọrụ ọ bụla were nseta ihuenyo nke ihuenyo ahụ, ndị niile so na otu ga -enweta ọkwa.
Ozugbo ewepụrụ ozi ndị ahụ n'ájá, enweghị ike nwetaghachi ya, nke na -enye gị njikwa zuru oke maka nzuzo gị, ọrụ anyị ga -ahụ na WhatsApp, ebe ị nwere ike weghachite ozi ehichapụ.
Developer: Ngwa Radical App LLC
WeChat bụ ngwa kachasị ewu ewu na China karịa ndị ọrụ 1.000 nde ma na -enye ọrụ nke ngwa izi ozi, dị ka ịkekọrịta foto ma ọ bụ vidiyo na oku olu.
Na -enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta ọnọdụ, mepụta otu nkata nke ihe ruru mmadụ 500 ma nwee oku vidiyo otu yana ndị ruru mmadụ itoolu.
Ngwa a nwekwara ike zụta ma kwụọ ụgwọ, nwee egwuregwu ... Ma na mpụga China anyị agaghị ahụ nke ọ bụla n'ime atụmatụ ndị a. Ọzọkwa, gọọmentị China nyochaa ọdịnaya niile dị na ngwa a, yabụ enweghị izo ya ezo na mkparịta ụka ahụ.
GroupMe gbadoro anya mee ka mkparịta ụka otu ma ọ bụ ozi ndị ọzọ zie ozi. Ọ bụ ngwa izi ozi ederede na -akwadokwa ndị ọrụ ka ha na -eziga ụdị mgbasa ozi ma ọ bụ ihe ntụrụndụ ndị ọzọ, dị ka foto na ihe ncheta olu.
Ikpo okwu a na -enye ndị ọrụ ohere mepụta mkparịta ụka otu na ihe ruru mmadụ 500. Ị nwere ike tinye kọntaktị site na adreesị ozi -e ma ọ bụ akara ekwentị, kekọrịta onyonyo, GIF, vidiyo na ụdị faịlụ ọ bụla.
Agbanyeghị na Microsoft nọ n'azụ ngwa a, enyebebeghị izo ya ezo na njedebe maka ọrụ a. Ọ bụ ezie na aha Microsoft nwere ike ime ka obi ruo gị ala, iji hụ na nzuzo gị, ị nwere ike chọọ ịtụle nhọrọ nkata ọzọ.
Kik bụ ngwa ozi ntorobịa. N'adịghị ka ọtụtụ ngwa chọrọ ka ị jikọta na nọmba ekwentị, Kik chọrọ naanị aha njirimara iji malite izi ozi.
Iji tinye ndị enyi ọhụrụ, anyị ga -enwerịrị nyochaa koodu QR gị site na igwefoto ngwaọrụ. The interface bụ fun na mfe iji.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ndị bi na ndị ọrụ nọ n'agbata afọ 13 na 24, Kik bụ ụzọ dị mma maka ndị nọ n'afọ iri na ụma na ndị na -eto eto imekọrịta ma mee ndị enyi ọhụrụ.
Telegram bụ otu ngwa ozi ama ama maka nzuzo. O nwere 256-bit symmetric AES izo ya ezo, 2048-bit RSA izo ya ezo.
Nke ahụ mere ka ọ bụrụ otu n'ime ozi izi ozi echekwara nke ọma. Ngwa na -enye ohere zipu faịlụ, nkwado ikpo okwu, nkata otu, nkwado GIF na ndị ọzọ.
A na -ewere ya dị ka otu ikpo okwu kachasị mma maka nchekwa yana ọ bụ nkeonwe zuru oke nke a gọọmentị ụfọdụ anaghị achọ ka ụmụ amaala ha jiri ya.
E wezụga otu na -akparịta ụka ihe ruru ndị ọrụ 200.000Ọ na -enyekwa gị ohere ịmepụta ọwa nkwukọrịta, ọwa nke ụlọ ọrụ na -eji, otu ndị mmadụ, mkpakọrịta ... iji rụọ ọrụ dị ka bọọdụ ọkwa.
Onye ọ bụla maara WhatsApp, ngwa ozi kacha ewu ewu n'ụwa. Ọ na -enye anyị ohere ịkekọrịta ụdị faịlụ ọ bụla, kpọọ oku ruru mmadụ iri ise (site na Facebook Messenger), zipu ozi ọdịyo ...
WhatsApp na -arụ ọrụ naanị site na nọmba ekwentị, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ nzuzo, nke a abụghị ngwa kachasị mma, n'agbanyeghị ozi niile ezoro ezo na njedebe na njedebe.
Ọ dị maka nke gị budata n'efu na anaghị etinye ụdị ịzụrụ in-app ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa ngwa izi ozi 25 kacha mma
Ụlọ ọrụ teknụzụ, ndị kacha baa uru n'ụwa
Etu ị ga -esi mara onye na -akọrọ m na Instagram